Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 9, 1-6)
Zazalahy no indro nomena antsika.
Ny vahoaka nandeha tamin’ny haizim-pito, nahita mazava lehibe; ary ireo nonina tamin’ny tany aloky ny fahafatesana, namirapiratan’ny mazava. Nampitombo ny vahoakanao Ianao, ary nataonao lehibe ny hafaliany; ka mifaly eo anatrehanao, toy ny fifaliana raha fararano izy, toy ny fihobiana an-kafaliana, raha mizara babo. Satria ny jioga nanavesatra azy, ny tsora-kazo nikapohana ny lamosiny, ny tehin’ny mpitoroka azy, dia samy notapahinao, toy ny tamin’ny andron’i Madiàna. Ny kapan’ny mpiady rehetra tamin’ny fikatrohana mbamin’ny kapaoty nihosin-dra rehetra, dia atao anatin’ny afo: ka levon’ny afo.
Fa misy zaza teraka ho antsika; Zazalahy nomena antsika; ka ny Fanjakana napetraka eo an-tsorony; ary ny Anarany atao hoe: Mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, Ray mandrakizay, Andrian’ny fiadanana, mba hanitatra ny fanjakana, sy hanome fiadanana tsy manam-pahataperana, ho an’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenany azy sy hanamafisany azy, amin’ny hitsiny sy ny rariny, hatramin’izao ka ho mandrakizay. Ny zotom-pon’ny Tompon’ny tafika no hanatanteraka izany.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’i Tito (Tit 2, 11- 14)
Efa niseho ho an’ny olona rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra.
Ry Kristianina havana, efa niseho ny fahasoavan’Andriamanitra, loharanom-pamonjena ho an’ny olona rehetra, mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an’Andriamanitra sy ny filan’izao tontolo izao, fa ho velona amin’ity fiainana ity manana ny toetr’olona mahalala onony, marina, tia vavaka, miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia i Jesoa Kristy, izay nanolo-tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin’ny ota rehetra, sy hanadiovany ho an’ny tenany ny vahoaka izay ho Azy tokoa sady fatra-pitia ny asa soa rehetra.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka (Lk 2, 1-14)
Mpamonjy no teraka ho anareo
Tamin’izany andro izany dia namoaka didy i Sezara Aogosta hampanoratra ny anaran’ny vahoakany amin’ny tany rehetra: dia fony i Sirinosy no governoran’ i Siria no natao izany fanoratana voalohany izany. Dia samy nankany amin’ny tanàna nihaviany avy izy rehetra mba hosoratana. Ary i Jôsefa koa niakatra avy tany Galilea avy tao an-tanànan’i Nazareta hankany Jodea ho ao an-tanànan’i Davida atao hoe Betlehema, fa taranaka sy fianakavian’i Davida izy, mba hosoratana izy sy Maria vadiny izay bevohoka. Fa raha tao izy, dia tonga ny fotoana hiterahan’i Maria, ary niteraka ny Zanany lahimatoa izy, dia nohodidininy lamban-jaza ka nampandriany teo amin’ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy hitoerany tao an-tranom-bahiny.
Ary tamin’izany tany izany nisy mpiandry ondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritra ny alina. Ary nisy anjelin’ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitr’Andriamanitra nanelatrelatra manodidina azy ireo ka natahotra dia natahotra izy. Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra ianareo, fa indro fifaliana lehibe ho an’ny vahoaka rehetra no lazaiko aminareo; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia i Kristy Tompo. Ary izao no ho famantarana ho anareo: dia hahita Zazakely voahodidina lamba-jaza, sady mandry ao amin’ny fihinanam-bilona ianareo. Ary niaraka tamin’izay nisy antokon’ny tafika any an-danitra tonga teo amin’ilay Anjely, ka nidera an’Andriamanitra, nanao hoe: « Voninahitra anie ho an’Andriamanitra any amin’ny avo indrindra, ary fiadanana anie ho an’ny olona etý ambonin’ny tany, fa nanehoany ny hatsaram-pony ».
Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Tenin’Andriamanitra
Alahady 19/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra